Mahantra any amin’ny distrika 20: 90 tapitrisa dolara ny fanampiana tantanin’ny FID | NewsMada
Mahantra any amin’ny distrika 20: 90 tapitrisa dolara ny fanampiana tantanin’ny FID
90 tapitrisa dolara ! Io ny vola narotsaky ny Banky iraisam-pirenena ho an’ny fanjakana malagasy amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola, ary ity farany indray namindra izany ho tantanan’ny FID (Fonds d’intervention pour le développement) hanaovana asa sosialy, miainga avy amin’ny politikan’ny minisiteran’ny Mponina, fiahiana sosialy sy fampivoarana ny vehivavy. Vola nomena io tsy averina intsony.
Hoentin’ny FID hanatanterahana tetikasa roa lehibe izany : « Fiavota » na « Vatsin’ankohonana » ho an’ny distrika 13, ary « Asa avotra mirindra » alefa any amin’ny distrika fito. Fianakaviana 150 000 heverina hisitraka ireo tetikasa ireo. Distrika 20 izany ny hahazo sitraka amin’izao famatsiam-bola, hanampiana ireo fianakaviana sahirana. Aiza avy ireo distrika ireo, ahoana ny fomba nisafidiana azy ireo ? Aiza anefa ny misy distrika na kaominina tsy ahitana tena mahantra ? Miaraka amin‘ireo mpamatsy vola, tanjona apetraky ny FID ny fiahiana sosialy hatramin’ny taona 2023, 15 % ho an’ireo miaina ao anatin’ny fahantrana lalina .
Natao teny Mahazoarivo ny fanaovan-tsonia izany teo amin’ny minisitry ny Toekarena sy ny vola, Randriamandrato Richard, sy ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny FID, Razanadrainiarison Rondro Lucette, natrehan’ny solontenan’ny Banky iraisam-pirenena, Coralie Gevers.